Izipho zangempela ezivela eSanta Claus
Abantwana bayayithanda izipho. Nangona kunjalo, iimeko ezixabisa kakhulu azikwazi ukuthelekiswa nesikhwama esithobekileyo, esasilungiselelwe umntwana phantsi komthi weKrisimesi ngoSanta Claus. Musa ukukhawuleza ukuba umxelele ukuba kwakunjani - vumela umntwana aphile kancinci kwimbali yamanqaku!
Ngomhla woNyaka omtsha, usoloko ujamelana neengxaki ezifanayo: uxelela umntwana obeka izipho phantsi komthi? Andifuni ukumkhohlisa, kodwa andinakukwazi ukuchaza isizathu sokuba usebenza njengomkhulu-i-wizard! Emva kwakho konke, umntwana ulindele umdlalo weqhinga!
Nala ngeli xesha inkwenkwe yayichitha ngokuhlwa ngokuthetha ngoBawo Frost kwaye yayiza kulinda umlumbi ode ude ukusa. Ekugqibeleni, wayesehlisa uxolo waza walala. Ngoko lixesha lesithethe. Unyuke ngokucophelela kwi-tiptoe ukuze ungenzi isandi. Phuma kwibhodibhodi ephambi kwephekto ephekwe ngaphambili, i-chocolates, i-doll, okanye ibhere le-teddy, iqela lephepha legolide, isisi kunye ne-scotch tape. Kwimizuzu embalwa, isipho esithandekayo siya kuba silungele. Ubeka ngenyameko isiqwenga esikhanyayo phantsi komthi weKrismesi. Kwaye kusasa uza kuvuswa ngomsindo womntwana: "Mama, yiza apha, khangela kamva, u-Grandfather Frost wandinika ntoni!" Ngaba kufanelekile ukutshabalalisa inkolelo engakholelwa kummangaliso? Gcina kwisilingo kwaye ungamthinteli umntwana weeholide. Ixesha liya kuza, kwaye umntwana wakho uya kuqagela yonke into ngokwakhe. Kodwa ukholo kumlingo luya kuqhubeka! Ewe, khumbula, uneminyaka emingakanani ubuye ukhangele izipho phantsi komthi kwaye ubhala incwadi-ufuna umnqweno uFrost? Kuthiwani ngento yokuba umlandisi weengcamango akayikho ngokwenene? Into ephambili kukuba isipho phantsi kwesihlahla, esishiye ngokukhethekileyo kuwe, sidala umoya weeholide kunye nommangaliso. Ngoko ungakhathazeki ngemibandela yokuphendula, vumela umntwana wakho ahlale ixesha elincinane kwihlabathi leengcamango zakho!
Ukholo olungagungqiyo kwintonga olungileyo lugcinwa kubantwana ukuya kwi-5-6 yobudala. Kodwa musa ukukhawuleza ukubeka uneminyaka engama-6 ubudala onamava akho emadolweni uze unikeze ingxoxo ethembekileyo. Emva koko, uyakhula unyaka wonke, oku kuthetha ukuba ukholo kwiimbali zamanqaku kunye nemimangaliso iba yinto engapheliyo. Iimvuthu, u-Grandfather Frost - uqobo ngokwenene, njengomama noyise. Umntwana akayicineli ingcinga yakhe xa ecinga umkhulu-ntombi. Kuye, akukho nto engaqhelekanga kwinto yokuba iWizard Frost ihlala kwiLapland, kwaye ngo-Eva wonyaka omtsha kunye nesigidi sezipho zihamba ngeenxa zonke kwiidi kwiqela le-reindeer! Enyanisweni, abantwana ba namhlanje abanalo ingcamango yokuba ityhimpe yintoni. Yaye ukuba uthe u-Grandfather Frost ungena ngokumangalisayo ngomnyango okanye ngewindow ye-ajar, umntwana akayi kumangaliswa konke. Kodwa ukuba uthetha konke njengoko kunjalo, ihlabathi lakhe lemilingo liya kuqubuka.
Ngakolunye uhlangothi , abantwana abaninzi abaneminyaka engama-7-8 banamava kakhulu xa beqonda ukuba akukho noTrans Frost ukhona. Abanye abantu bafumana ubunzima ngokuqhelekileyo, abanye bahlupheka. Ngamanye amaxesha abazalwana kunye noodade abadala bakhupha ioli kwioli, bememezela ngokucacileyo ukuba: "Nguwuphi ukhulukazi? Izipho zomthi weKrisimesi zifakwa ngumama nobawo! Kwaye usencinane kakhulu, ukuba ukholelwa kwimiba enjalo. " Kuphi ukuveliswa kokugcina? Enyanisweni, unyana okanye intombi eneminyaka eli-10 ayinangqiqo ukuthetha ngoTatomkhulu ngeendvuba zekhephu, ilizwe lefilophu yaseLapland, intambo yeentambo kunye nekhwagi lomlingo ngezipho - akunakwenzeka ukuba akholelwe. Kodwa umntwana oneminyaka engama-6 unokuphendula ngokupheleleyo: "Uyazi, umzalwana wakho omdala wakhula kwaye akakholelwa ku-Grandfather Frost. Ngoko ke, ndimbeka izipho phantsi komthi, mna kunye nobawo. Kodwa ukholelwa kwidilesi, kwaye uya kuza kuwe! "
Ukuba umntwana wakho uneminyaka engama-2-3 kuphela , musa ukukhawuleza ukummisela kuSanta Claus - umntwana unokwesaba. Nika iimvumba ixesha elincinane ukuba ufundele umgcini webali: makangasetyenziselwa iingubo eziqhakazileyo, intshebe emhlophe emide. Kuphawulwe ukuba abaninzi abantwana abaneminyaka engama-2-3 kwangoko bathambekele kwi-Snow Maiden, kodwa uYise Frost uyamoyika.
Unokucela umntwana omdala ukuba agcine imfihlo kaSanta Claus. Emva kwakho konke, awukwazi ukunqumla umntakwabo okanye udade omncinci weholide! Ndixelele ngelinye ilanga baya kudlala noSanta Claus phambi koonyana babo. Ukuba umntwana wakho akakholelwa kwiimifanekiso zengcamango, ungagxininisi. Ndixelele nje ukuba wena ngokwakho ufunde inyaniso ngoBawo Frost ngexesha elifanelekileyo. Chaza ukuba ngaba abadala banceda abantwana ukuba bakhuphe iinkumbulo ezimnandi zobuntwana.
Amagqirha asendle anamandla onke : enza okulungileyo aze ajezise ububi. Kwaye uYise Frost kulolu chungechunge luyodwa, kuba akaze amgwebe umntu kwaye akagwebi nabani na. Yena-njengento elungileyo, uhlala efika kumntwana, rhoqo, uhlale unikela umdlalo okanye ibhokisi yeekleta. Kubantwana, uyinyaniso, ubafundisa ukwenza izinto ezilungileyo ukususela ebuntwaneni kunye ... ukuxolela. Utata ozukileyo, ngokungafani noSt Nicholas, ungaze ubeke intonga phantsi komthi ukuziphatha kakubi. Ihlabathi lemfayelo yabantwana yindawo yokukhusela umntwana, inkxaso yayo ethembekileyo. Kwaye kubalulekile ukuba uzive ukuba kukho umlingo okhumbuzayo kwaye uya kuza kuye.
Indlela yokukhetha ubungakanani obufanelekileyo beengubo
Indlela yokugcoba iingubo zokugqoka
Ukulondoloza uhlahlo lwabiwo-mali kunye nemali
Indlela yokuGqweshwa kweNdwendwe ekhuthaza umxhasi kunye noBudlelwane bezoBudlelwane
Indlela yokukhulisa uthando lomntwana
I-Risotto enee-mushroom ze-porcini
Iipilisi zeGel zokuhlamba
Indlela abaculi bekhofi abakhohlisayo ngayo: Sikhetha izinto ezibonakalayo eziphezulu
I-Cream Best Moisturizing Face Cream
Ukunyamekelwa kweenwele ebusika
I-Zucchini kunye nomnquba
Indlela yokuphatha i-sinusitis engapheliyo ekhaya
Ukutya umntwana ogulayo
Ukunyamekela kakuhle izipikili zejel
Indlela yokuqala ulwalamano olutsha
Ukubhaka kwidada le-oven. Iresiphi kunye neengcebiso kubaqalayo